China YF-HY-2 11 vatasarihana tsy misy mpanamboatra fitaratra sy mpamatsy | Yifan
Amin'izao fotoana izao, ny latabatra zava-poana dia mifaninana amina fanaka avo lenta momba ny vidiny. Tsy misy olona hisakana ny olona tsy hahazo raha mahay mandany zava-poana. Raha sendra mitady zava-poana ianao izao dia faly aho manondro safidy roa. Mividiana fitaratra amin'ny rindrina ary apetraho seza ary koa latabatra fisakafoanana kanto sy ahazoana aina. Izay no efa haharitra ny zava-poana amin'ny nofinofisinao. Faharoa, mividiana remover makiazy izay voafetra ny fitehirizana na mividy kaontenera plastika vitsivitsy ary ampiasao izany miaraka aminy.
Mila miatrika olana amin'ny habakabaka ao amin'ny trano kely misy anao? Efa nitady zorony manokana ve ianao? Mila toerana bebe kokoa hitehirizana ny makiazy, ranomanitra ary fitaovanao makiazy ve ianao? Vehivavy ianao ary te hijery tsara isan'andro ianao, ary fantatray ianao. Izany no antony anananay ny valiny notadiavinao! Ny setroka zava-poana ataon'ny zorony dia miaraka amin'ny fitaratra mijoro telo sosona ho anao hijerena ny zoro amin'ny tarehy rehetra. Aza mieritreritra intsony hoe "aiza no hitahiry" ny hatsaran-tarehinao. Miaraka amin'ny vatasarihana 11 izay manome toerana malalaka kokoa noho izay ilainao.
Vita amin'ny hazo fotsy izy io dia hifanaraka amin'ny efi-trano rehetra satria fantatsika rehetra izany, miaraka amin'ny zavatra rehetra ny fotsy. Namboarina tamin'ny fitaovana premium ihany.
Nampianatra momba anao izahay, na dia lehilahy ianao! Azonao atao ny mividy azy ho an'ny vadinao, ny sakaizanao na ny zanakao vavy. Minoa anay, fahagagana tonga lafatra izany!
Apetraho eo amin'ny vatasarihana mafy ny takelaka tsara tarehy raha hijery feno. Ahitana vatasarihana malalaka 4 (2x) izay asongadin'ireo bokotra vatasarihana Crystal Lux
Size: 150 * 60 * 80cm
Sarin'ny vatasarihana: 43 * 15.6 * 60cm
Fitaratra misy refy fototra 45.75 "W x 12.75 'D x 32.5" H
Fitaratra tsy misy refy amin'ny Base 43.25 "W x 2.75" D x 31.5 "H
Loko: Mena, fotsy, mavokely mavokely (Azo alaina amin'ny sonia Glossy White, Pro Black, Shimmery Silver, Champagne Gold, ary Rose Gold premium)
manohana ny OEM amin'ny habe sy ny loko izahay, azafady mba mifanakaloza hevitra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Ny hatsaran-tarehy glamor any Hollywood miaraka amin'ny fahatsorany tsotra izay nahatonga ny olona tia olona makiazy, mpomba sy mpitoraka bilaogy hatsaran-tarehy ho tia. Midira vanitista falifaly an'arivony ary avelao hirehitra ny isan'andro!
Previous: Vatasarihana YF-HY-1 13
Manaraka: Vatasarihana YF-HY-3 3
Hollywood Mirror Vanity Mirror
Hollywood Vanity latabatra napetraka
Fomba maoderina Hollywood Mirity Makeup Hollywood Vanity